Basket-ball Afro League :: Hotsenain’ny klioban’ i Angola ny Pôlisy malagasy • AoRaha
Basket-ball Afro League Hotsenain’ny klioban’ i Angola ny Pôlisy malagasy
Hanomboka ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo klioba tompondaka, amin’ny fihaonana amin’i Petro Atletico avy any Angola, ny ekipan’ny Pôlisim-pirenena malagasy (Cospn), amin’ny zoma ho avy izao, eny amin’ny lapan’ny Fanatan-jahantena Mahamasina. Hotanterahina amin’ny faran’ny herinandro izao ity fifaninanana eo amin’ny vondrona D ity. Hateloana no hifaninana ireo klioba efatra hanamarika ny dingan’ny
1 /16-n-dalan’ity hetsika andiany voalohany ity.
Ny klioban’ny Smouha avy any Ejypta kosa no hifanandrina amin’ny solontena malagasy amin’ny andro faharoa, amin’ny sabotsy ho avy izao, raha ny ekipan’ny BC Mazembe avy any RD Congo no hamarana ny fifaninanana miaraka amin’ny Cospn, tompondakan’ny Faritra fahafito, ny alahady hariva.
Manomboka, anio, no ho avy ireo delegasiona vahiny ka ny solontenan’i Angola no andrasana voalohany. Ny alarobia kosa no ho avy ny delegasionan’i Ejypta sy Congo. “Tsy hiatrika lalao tsapa intsony izahay hisorohana ny mety ho faharatrana mialoha ny fifaninanana”, hoy i Julien Chaignot, mpanazatra ny ekipan’ny Cospn. Niantso mpilalao maromaro hanatevina azy ny Cospn ka isan’ireny ry Livio sy Ronald, izay efa niaraka tamin’izy ireo tamin’ny fifaninanan’ny faritra fahafito. Nanatevina azy ireo ihany koa ry Zezy, Ricky, Mohamed Mzoughi (Toniziana), Alpha Touré (Senegaly mizaka ny zom-pirenena frantsay). Isan’ireo nantsoina ihany koa i Allan Fall, teratany frantsay fanta-daza eo amin’ny tontolon’ny basket-ball. Mpilalao nanate-vina ny Sebam tamin’ny
fifaninanam-pirenena N1A tamin’ny taona 2010 i Allan, izay niara-nilalao tamin-dry Rina sy Daguet fahiny.
Basket-ball Afro League :: Hotsenain’ny klioban’ i Angola ny Pôlisy malagasy - ewa.mg dit :
[…] Basket-ball Afro League :: Hotsenain’ny klioban’ i Angola ny Pôlisy malagasy est apparu en premier sur […]
Fanafihana nahafatesana mompera :: Noesorina avy hatrany ny lehiben’ ny zandary any Mahitsy